विद्यमान परिस्थितिको दोषी को हो ? | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / पाठक पत्र / विद्यमान परिस्थितिको दोषी को हो ?
विद्यमान परिस्थितिको दोषी को हो ?
Posted by: युगबोध in पाठक पत्र January 14, 2015	0 327 Views
विगत लामो समयदेखि नेपाली जनता राज्यद्वारा अपहेलित हु‘दै आइरहेको सर्वविदितै छ । जनताको श्रम र पसिना राज्यका शासक वर्गहरुले चुस्दै गरिव जनतालाई झन् गरिव बनाइरहेका छन् । कुनै निकाय नहोला सोझा जनता नठगिएको, नलुटिएको । अब त यस्तो लाग्न थालिसक्यो कि सोझा सिधा जनताले त आफ्नै देशमा ठूलो सजाय भोग्न बाध्य छन् । राज्यको दमन आतंकबाट मुक्ति पाउन अब छक्कापञ्जा गर्नैपर्ने होइन भने त सोझो तरीकाले गरिखान नदिने । सरकारी कार्यालयहरुको काममा ढिलासुस्ती बेवास्ता सोझा जनतामाथि हुनेगर्छ । टाठाबाठाहरुले त अनेक तिकडम गरी आफ्नो काम गर्दछन् ।
त्यसको बारेमा स्थानीय प्रशासन ठूला डिलरहरुस‘ग चु‘ गरेर बोल्दैनन् । बरु साना खुद्रा पसलेहरुलाई अनेक दुःख दिने गर्दछन् । मानिलिउ‘ हर्लिक्स बिस्कुटको म्याद गुज्रिएको छ । बजारमा अनुगमन गर्दा त्यस्ता बिस्कुट थुप्रै भेटिए भने त्यो बिस्कुट बिक्री गर्ने आधिकारिक थोक बिक्रेतालाई ती सामान बजारबाट फिर्ता लिन प्रशासनले उर्दी जारी गरेमा राम्रो हुन्थो । तर त्यसो गरिदैन ।
यस्ता थुप्रै तमाम बेथितिहरु छन् । त्यसको मुख्य कारक तत्व भनेको राज्यले जनताप्रति बेवास्ता गरेको छ । जनताले देशमा राम्रो कानून होस् सबैलाई नियम कानून बनोस् भनेर नेता चुने पनि सबैभन्दा भ्रष्ट ती नेताहरु हुन्छन् । नेता नै बिग्रिएपछि अन्य निकायको के काम ? अब देशलाई सही दिशामा डो¥याउन सक्ने र जनचाहनाअनुसार काम गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टीको नेतालाई छनोट गर्न नेपाली जनताले कञ्जुस्याइ‘ गर्नुहु‘दैन ।
तुल्सी भट्टराई ‘चिन्तक’
Previous: दाङको कम्युनिष्ट आन्दोलन–२
Next: सत्ताको ¥याल, सिंह र स्याल ?